အလုပ်ခေါ်ယူခြင်း | Shii-Farm
1965 နှစ်တွင် လယ်သမားတစ်ဦးမှစတင်လုပ်ဆောင်သည့် SHII-FARM
လက်ရှိဟင်းသီးဟင်းရွက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှ အအေးခံ၊ အခြောက်ခံလုပ်ငန်းအထိ One Stop Service ဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ နှစ်စဥ် တန်ချိန် 8000 ခန့်သောကုန်စည်များကိုတင်ပို့နိုင်သည့် လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းအထိ အောင်မြင်စွာလျှောက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများကိုခေါ်ယူလျက်ရှိပါသည်။
နောင်တွင်လည်း ပို၍များပြားသောဝယ်ယူသူများထံ ဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချရပြီး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တို့ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် သင်တို့၏လုပ်အားကိုလိုအပ်ပါသည်။
အစားအစာကိုအလေးအနက်ထားပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ အကောင်းဆုံးဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို ထုတ်လုပ်ကြည့်ကြမလား?
SHII-FARM ၏အဓိကဖြစ်သော လယ်ယာလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှု၊ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲ့မှု၊ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစသည့်3နေရာတွင်ခေါ်ယူလျက်ရှိသည်။
လယ်ယာသီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ရိတ်သိမ်းခြင်းသည် အများအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှုပ်ရှား၍ လုပ်ကိုင်ရသောကြောင့် လယ်ယာလုပ်ကိုင်မှသာရရှိနိုင်သည့် စိတ်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်ခြင်းနှင့် အလုပ်လုပ်ရကျိုးနပ်သည့်ခံစားချက်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ကုန်တင်ယာဥ်မောင်းလိုင်စင်နှင့် တွဲကားယာဥ်မောင်းလိုင်စင်ရှိသူများကိုဦးစားပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများကိုလည်း ကြိုဆိုပါသည်။
အထက်တန်းပြီးဆုံးပြီး အသက် 59 နှစ်အောက် (ပင်စင်အသက်ကိုကန့်သတ်ရန်)
※အတွေ့အကြုံမရှိသူ၊အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်မရှိသူနှင့် မြို့ပြမှကျေးလက်သို့အလုပ်ပြောင်းချင်သူများလျှောက်ထားနိုင်၊ အတွေ့အကြုံမလိုအပ်ပါ။
※ရုံးတွင်းဆိုင်ရာအလုပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ကွန်ပျူတာကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်သူ (Word, Excel, Email)
4881-17 Miyazaki Freeway Industrial Park, Oaza Hirowara, Takaharu-cho, Nishimorokata-gun, Miyazaki-ken.
Bldg., 3028 Mikanoyama, Nojiri-cho, Kobayashi-shi, Miyazaki-ken.
8:00～17:00 (နားချိန် မိနစ် 90)
※ပုံမှန်မဟုတ်သည့်အလုပ်ချိန်ပုံစံ/နှစ်စဥ်အလုပ်ချိန်စုစုပေါင်း 2085 နာရီ
ရုံးပြင်ပ: 8:00～17:00 (နားချိန် မိနစ် 90)
※တစ်ပတ်လျှင်4ရက်မှ5ရက်
ရုံးတွင်း ：①9:00～ 13:00 (နားချိန်မရှိ)၊ ②13:00～ 17:00 (နားချိန်မရှိ)
※ တစ်ပတ်လျှင်5ရက်
7:30～17:00 (နားချိန် မိနစ် 90)
နေ့စားခ 5,925 ယန်း မှ 8,445 ယန်း
နေ့စားခ 5,925 ယန်းမှ 7,733 ယန်း
နေ့စားခ 6,320 ယန်း မှ 8,500 ယန်း
နေ့စားခ 6,320 ယန်း မှ 9,000 ယန်း
နေ့စားခ 6,320 ယန်း မှ 8,248 ယန်း
တစ်နာရီလုပ်ခ 790 ယန်း〜
တနင်္ဂနွေ၊ အိုဘွန်း၊ နှစ်သစ်ကူးနှင့်အခြားပိတ်ရက်၊ လစာပြည့်ခွင့်၊ တစ်နှစ်လျှင် ပိတ်ရက် 87 ရက်
တနင်္ဂနွေနှင့်အခြား၊ အိုဘွန်းပိတ်ရက်3ရက်၊ နှစ်သစ်ကူး5ရက်နှင့်အခြား၊ အခြေအနေအရ (ရာသီဥတု) ပြောင်းလဲမှုရှိ၊ လစာပြည့်ခွင့် ◆ပိတ်ရက်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ အစိုးရရုံးပိတ်ရက်၊ အိုဘွန်း၊ နှစ်သစ်ကူး၊ လစာပြည့်ခွင့်၊ တစ်နှစ်လျှင် ပိတ်ရက် 95 ရက်
တနင်္ဂနွေ၊ အခြား၊ လစာပြည့်ခွင့် (ဥပဒေအရ)
စနေ၊ တနင်္ဂနွေ၊ အိုဘွန်း၊ နှစ်သစ်ကူးပိတ်ရက်နှင့်အခြား
ခရီးစားရိတ် (တစ်လမ်းလျှင် ရုံးမှအကွာအဝေး2ကီလိုမီတာအထက်၊ အများဆုံးယန်း2သောင်း၊စည်းမျဥ်းသတ်မှတ်ချက်ရှိ)
ပင်စင်အသက် 60 နှစ်၊ ပင်စင်နှစ်တိုးအသက် 65 နှစ်အထိ
အလုပ်သင်ကာလ3လ (တူညီသတ်မှတ်ချက်)
လစာတိုးခြင်း၊ ဆုကြေးငွေ (ဘောနပ်စ်)
ခရီးစားရိတ် (အကွာအဝေးနှင့်၊ စည်းမျဥ်းအရပေးဆောင်မည်)
ပင်စင်အသက် 60 နှစ်၊ ပြန်လည်ခန့်အပ်သည့်စနစ်ရှိ(ပင်စင်အသက် 60 နှစ်ဖြစ်သော်လည်း၊ အသက် 60 နှစ် နှင့်အထက်လည်းလုပ်ကိုင်လျက်ရှိ)
အောက်ပါ “Entry” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး၊ လိုအပ်သည့်အကြောင်းအရာတို့ကိုဖြည့်စွက်ပြီး ပေးပို့ပါ။
အထွေထွေဌာန၊ Kimura Shii：0984-42-5525